"Awukwazi ukunikela ingqalelo kakhulu kwizihlangu zakho. Abasetyhini abaninzi bakholelwa ukuba izicathulo azibalulekanga, kodwa ubungqina bobubungqina bendoda ibhinqa inyawo. " Christian Dior
I-wardrobe efanelekileyo yabesifazane iqala ngezicathulo! Nguye onokuyifumana ngokufanelekileyo umfanekiso wakho, okwenza ube mnandi kunye nenhle. Makhe sihlolisise ukuba zeziphi izicathulo ezifanele zibandakanye isambatho esiyintloko yentombazana nganye.
Izikhwele ziphuma kwifestile kunye nexesha-izihlangu. Isisombululo esipheleleyo somsebenzi wemihla ngemihla siyizithende, kuba kukudala, kukuvumela ukuba wenze imifanekiso yowesifazane kunye nenhle, kungekhona nje ngemihla, kodwa kwiofisi. Umzekelo wombala omnyama unakho ukuxhasana nantoni nayiphi na inkangeleko kwaye ugxininise ukuphakama komfazi. Olunye uhlobo lweembadada, ezinokuthiwa ngamathambo ezinkcubeko zamandulo. Ngoko, kwiivenkile ze-kari, unokufumana izicathulo ezibomvu, ezipinki okanye ezihlaza okwesibhakabhaka eziza kubakho lula ukuba zikhangele, zikhangele abanye kwaye zisebenze ngokuhambelana komfanekiso wakho.
Iimodeli zinokuhluke kakhulu:
Naluphi na ukhetho oluza kunika umfanekiso wesimboli kwaye ungeze i-twist.
Ukwenza umfanekiso ocolileyo kwaye ukhululekile, izicathulo ze-ballet okanye izicathulo ezisezantsi ziza kwenza. Ukwenza i-wardrobe yesiseko, khetha i-monochrome version ngaphandle kokuhlobisa. Iimvulo ezithandekayo zibukeka zifana kakuhle ngee jeans, kunye neebhulukhwe okanye ingubo. Izicathulo ezincinci eziphantsi kweesithende esincinci - le yinye imodeli, ngaphandle kokuba ungenakuyenza ngaphandle kwesigqoko esisezantsi.
Ukuthintela kunye neetononic, ezinikezelwe kwiqoqo le-Pierre Cardin izicathulo ezivela kari, ziya kulungele ukudala umfanekiso kwisitayela esingaqhelekanga. Izibalo zincoma ukuba ukhethe izicathulo zekwindla zamathunzi amnyama, avuyiweyo. Kwiintsuku ezifudumalayo kunye nelanga kufunekakile ukukhetha ukuhlanganiswa kwe-beige okanye i-cream.
Iibhotshi - inxalenye ebalulekileyo yegrafti
Izibhathane ze-Suede zilungele abo baxabisa induduzo kunye nokubonakala kwangexesha elibandayo. Esi sigqibo singumzekelo wobunqunu, i-urban chic kwaye, ngokungathandabuzeki, kulula, njengoko kubonakala ngokuqwalasela ukuqokelela izicathulo ze-Alessio Nesca, ezenziwe kwii-kari.
Umzekelo wendlela yokuguqa ebusweni obumnyama okanye obumnyama obunokubangela ukuba ukhange ubuhle kunye nenhle kwiqela, eofisini, kwi-reception social or walk. Enye imodeli enokumele uyibeke ingqalelo xa ukhetha izicathulo zibhokisi ze-jockey eziya kulungele izizathu ezahlukeneyo-kokubili ukuhamba kunye neqela. Nangona baninzi abawasebenzisa njengezihlangu zansuku zonke, ezi zibhokisi zinako ukugcina ukubonakala okucwangcisiweyo ixesha elide.
Ikhadi le-kari elininzi elinomsebenzi CLUB - isiseko sezinto ezithengisayo
Ukuba uthengela kwii-stores ze-kari, ngoko unokwenza i-wardrobe yokugqoka isambatho ngenzuzo enkulu ebhajethi yakho yosapho. Ukutsaliswa kwale ntanethi ayikho kuphela kwiindawo ezahlukeneyo, iimpahla eziphezulu, kodwa, kwaye kubalulekile, ixabiso lentando yeninzi. Kwaye kuba ngumnikazi wekhadi le-kari CLUB elincinci, inqanaba lokugcina imali liya kuvela, njengoko inkqubo yokwethembeka kwiivenkile ze-kari ikuvumela ukuba ujabule ngokufumana izinto ezintsha ngaphandle kokuya ngaphaya kwe-budget ecwangcisiweyo.
Ziziphi iingenelo zeKari CLUB? Ukunqongophala kwayo kunye nokukwazi ukuqokelela amanqaku ebhonasi kunye nokuhlawula ukuthenga. Ukuthenga izinto kwi-network kari kunye ne-kari ye-KIDS yokugcina isetyenzisi usebenzisa ikariti ye-kari CLUB, ufumana i-10% yentengo yokuthenga ngendlela yeebhonasi, ekugqibeleni, inokuhlawula i-30% yeendleko zeempahla. I-Arithmetic yinto elula kakhulu - enye inqaku lilingana ne-ruble enye. Inkqubo, apho abathengi bama-kari bafumana ikhadi elikhethekileyo elisebenzayo, lilungelekile kuba ikhadi alikhululeki ngokupheleleyo. Ikhadi le-kariCLUB linamanye amancedo amaninzi. Ukuzaliswa kwekhadi ngenkokhelo, ungenza imali yokutshintshwa, uhlawule iibhilikhwe, uhlawule kwezinye izitolo, kwi-cafe kunye nakwizikhululo zegesi. Olunye ulwazi malunga nazo zonke iinzuzo zifumaneka kwi http://www.kari.com. Ukuthenga izicathulo e-kari kukhululekile kwaye kunenzuzo: umgangatho ogqwesileyo kwixabiso elithengekayo, intlobo eyahlukeneyo kunye nekhadi le-kari CLUB elincinci.
Yintoni ekunxiba iimfeshe kwi-autumn ekwindla nangentwasahlobo, ebusika kunye nehlobo: iifoto ezingama-30 zeefoto zemifanekiso
Duo yesitayela: izicathulo + isikhwama njengendlela yokubanda kweli xesha elibandayo
Iintlobo zabasetyhini ngokubhekiselele kumona
Iindlela: njani ukuphumelela umntu?
Khangela ukuba i-IQ yakho ingaphezu kwama-140%?
Ukuba umntu usela kancinci, izizathu
IKrismesi yamaKrismesi 2015: xa uKrisimesi yamaKatolika ibhiyozelwa, umhla
Ukucoca umzimba: i-detox spa
Indlela yokukhetha umntwana ohamba kakuhle